Showpad: Ọdịnaya Ahịa, Ọzụzụ, Njikọ Aka na Nnwale | Martech Zone
Tuesday, May 12, 2020 Tọzdee, Ọktoba 1, 2020 Douglas Karr
Ka azụmahịa gị na-apụta na ndị otu ahịa, ị ga-ahụ na ọchụchọ maka ọdịnaya bara uru na-aghọ ihe dị mkpa n'abalị. Ndi otu ahia na acho akwukwo ocha, ihe omumu, ihe ngwugwu, ihe omuma ahia na oru… ma ha choro ka ha dozie ha site na ulo oru, ntozu ndi mmadu, na ndi ahia.
Gịnị bụ Ahịa Kwado?
Enkwado strategiczụ ahịa bụ usoro dị mkpa iji kwadebe ụlọ ọrụ ahịa yana ezigbo ngwaọrụ, ọdịnaya na ozi iji ree nke ọma. Ọ na - enye ndị ahịa ikike inyefe ahụmịhe na - atọ ụtọ maka ndị na - azụ ahịa nke oge a na - atụ anya ịhazi onwe, akụrụngwa, yana ọhụụ ọhụụ.
Remote Sales Kwado
Site na mkpọchi COVID-19 na-adịbeghị anya, ndị otu ahịa tufuru ike iji aka ha jikọọ na atụmanya ha na ọnọdụ ma ọ bụ site na nzukọ. N'ime obodo ere ka toro na mmasị na nkwado nke ime na-ere abụwo ihe ịma aka. N'ezie, ihe karịrị ọkara nke otu niile kwuru na ire ere n'ime obodo bụ ihe ịma aka.
Na coronavirus dị oke egwu maka ụwa, mana ọ dị mma maka inyeaka ahịa… A na-agwa ndị ahịa ị nwere ka ha were ndị ọzọ - mee obere ihe karịa. Ahịa ntinye aka na-eme ka arụmọrụ na arụmọrụ.
Mary Shea, Forrester Onye nyocha
Jide n'aka na-lelee Ngosipụta Remote Na-ere Akụrụngwa Hub. Showpad wuru Hub iji nyere ndị otu aka gafere na ụdị nke dịpụrụ adịpụ. Ọ bụ kpam kpam free na-agụnye a video usoro si Mmeri Site Nhazi, blog posts na ire, nchịkwa, onboarding, yana ndụmọdụ site n'aka ndị ọkachamara Showpad.
Showpad nwere usoro nkwado ahịa zuru oke nke na-etinye akụkụ niile nke njem ahịa ndị achọrọ:
Ọbá akwụkwọ ọdịnaya nke dị mfe ịchọ
Contentzụta ọdịnaya nke na-arụ ọrụ ma na-ahaziri ya
Nghọta ahịa maka ịlele ọdịnaya gị na arụmọrụ otu
Njikọ ọnụ iji rụọ ọrụ ahịa na-arụ ọrụ na ịkwanye data n'ime CRM ma ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta.
Enkwado Nkwado enablezụ ahịa na-enyere ụlọ ọrụ aka itinye usoro mmụta na mmepe ahịa na-aga n'ihu, mee ka arụmọrụ nke usoro ahịa ahụ ka mma, mee ka ndị na-ere ahịa nwee mmekọrịta dị mma na ndị na-azụ ahịa, ma mezie mbọ ahịa na ahịa.
Nlele Ọdịnaya Ngosipụta
Showpad na enyere ndi otu aka ka ha nwee otu ebe etiti diri ndi n’ere ahia ka ha choputa, gosiputa ma kesaa ihe ohuru, n’ime ngwa ahia n’ime ahụmịhe anya. Usoro njikwa ọdịnaya Showpad iji jikwaa ọdịnaya gị nke ọma, ma gwa ndị otu gị ọsọ ọsọ maka mmelite ọ bụla - na-eme ka ọdịnaya dị mfe dị mfe maka ndị kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị. Showpad nwere ike ijiko na CMS dị ugbu a ma ọ bụ DAM iji webata ma ọ bụ mekọrịta ọbá akwụkwọ faịlụ gị niile.
Onye ngosi Showpad
Nyefee ndị ahịa gị ọzụzụ, ọzụzụ, na ịnye ha ọzụzụ ka ha bụrụ ndị ndụmọdụ tụkwasịrị obi wee gafere oke na ngwa nkuzi na ọzụzụ nke Showpad Coach na ngwanrọ ọzụzụ. Na Showpad Coach, ị nwere ike:
Train - Nyefee itinye aka na ọzụzụ iji nyere ndị nnọchi anya gị aka ịga nke ọma.
Nyochaa - Nyochaa njide nke otu gị iji chọpụta ma lebara ebe ndị na-adịghị ike anya.
Practice - Mee ka obi sie gị ike site na omume edere edere, ọrụ-egwu na nyocha ndị ọgbọ
Nchịkwa - Leverage nchịkọta na ndekọ ndekọ bara ụba ka ndị njikwa wee nwee ike nchịkwa nke ọma
Ihe ngosi ohuru Showpad Coach Onye njikwa Hub na-eme ka ịzụ ahịa na ọzụzụ maka ọzụzụ n'ọhịa na n'ime ahịa ahịa, ma ka na-ahapụ oge maka ndị njikwa iji rụọ ọrụ ụbọchị ha.
Ihe ngosi Showpad
Mee ka ire ahịa na ire ahịa dịwanye mma ma mekwaa ka igwe na-atụ aro site na ịghọta etu ndị na-ere ahịa na atụmanya ga-esi jiri ọdịnaya na ọzụzụ gị na-emekọrịta ihe. Atụmatụ gụnyere:
Nchịkọta ọdịnaya maka ire ahịa - Tinyekwuo ego na ọdịnaya na-emetụta ego.
Na-atụ anya nghọta maka ahịa - Mee ka usoro ahia gị belata site na ịchọọ ọkwa nke onye na-azụ gị.
Nchịkọta ndị ọrụ maka iduzi ahịa - Gbanwee omume gị kacha ere ahịa ka ọ gaa nke ọma
Ru ọgụgụ isi - Ree amamịghe ma nyefee ahụmịhe ndị ọzọ ahaziri iche na ọnụọgụ na-enweghị atụ na ọtụtụ data.
Meziwanye arụmọrụ ahịa site na iji akpaghị aka jikwaa njikwa ọdịnaya site na iji akpachapụrụ akụ Showpad, ma ọ bụ wulite ngwa dị ike yana usoro nyocha site na iji Showpad's API siri ike na SDK. Mmekọrịta, Gụnyere:
content - mekọrịta ya na Outreach ma ọ bụ Salesloft
Njikwa mmekọrịta ndị ahịa - gụnyere Salesforce, Microsoft Dynamics, ma ọ bụ SAP.
Njikọ Email - Outlook na G Suite.
Ahịa ahia - gụnyere Marketo.
n'ihu - dezie Google Slides ma ọ bụ Microsoft PowerPoint n'ime Showpad
Ikesa ihuenyo - enweghị nkebi Mbugharị na Google Kalinda mwekota.
Social - Kekọrịta ozugbo na Twitter, LinkedIn, na WhatsApp, ma ọ bụ detuo njikọ na usoro mmekọrịta ọ bụla ọzọ site na iji ndọtị Showpad na Google Chrome.
Showpad nwekwara API niile dị mkpa na SDK iji jikọta ikpo okwu n'ụzọ zuru oke na ikpo okwu ọ bụla.
Tags: aiakaebe njikọ akagoogle suitegsuiteahịaMicrosoft Dynamicselele microsoftije ozigbonchịkọta ahịanyocha ahịaịnye ọzụzọ ahịaọdịnaya ahịaNkwado ire ahịaihe omuma ahiammesiri irearụmọrụ arụmọrụomume ire ereihe ngosi erereọzụzụ ahịasapshowpad
Tinye Ntanetị Podcast na Mpụga na faili ntanetịime gị